eNasha.com - हजुरआमाले जुम्ल्याहा जन्माइन्
हजुरआमाले जुम्ल्याहा जन्माइन्
अमेरिकाकी एक ६० वर्षीया महिलाले जुम्ल्याहा बच्चा जन्माएर चकित पारिदिएकी छिन् । हजुरआमा उमेरकी यी महिलाले गएको मंगलबार दुइ स्वस्थ बच्चा जन्माएर जुम्ल्याहा जन्माउने अमेरिकाकै सबैभन्दा बूढी आमा बनेकी छिन् ।
उनले न्यूजर्सीस्थित ह्याकेनसाक युनिभर्सिटी मेडिकल सेन्टरमा जुम्ल्याहा जन्माएकी थिइन् । फक्स न्यूजका अनुसार पहिलो बच्चा ४ पाउण्ड ११.४ औंसको र दोस्रो बच्चा ४ पाउण्ड ११ औंसको रहेको छ ।
एकै बेतमा दुइ छोराकी आमा भइसकेपछि बिर्नबुमले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै भनिन्- "मलाई यो क्षण ज्यादै आनन्ददायी लागिरहेको छ । अहिले म ज्यादै आराम अनुभव गरिरहेको छु । यिनलाई जन्माउनु नयाँ अनुभव पाएको महसूस भइरहेको छ ।"
बुधबार बिहानैदेखि बच्चाहरुले दूध चुस्न थालिसकेको डाक्टरहरुले बताएका छन् । आमा रातभर राम्रोसँग निदाएको बताएका छन् ।
मनोचिकित्सकसमेत रहेकी बिर्नबुम र उनका वकिल पति केनका यसअघि नै तीन छोराछोरी छन् । ६ वर्षका छोरा, २९ वर्षीय छोरी र तीमाथिका ३३ वर्षीय छोरा । ३८ वर्षको लामो वैवाहिक जीवन सँगै गुजारिरहेका यी दम्पत्तिले चाहिँ नयाँ जन्मिएका दुइ छोराहरुको नाम अझै सोच्न भ्याएका छैनन् । तर ज्याक र जेड राख्ने कि भनी विचार गरिसके ।
"यो उमेरमा दुइ खाइलाग्दा छोरा र स्वस्थ आमालाई देख्न पाउनु बिरलै घटना हो", युनिभर्सिटीका गाइनोलोजिस्ट डा. अब्दुल्ला अल-खानले खुशी हुँदै भने- "र, ती तीनै जना स्वस्थ र मज्जका छन् ।"
"जब मैले बच्चा पाउने कुरा गरेँ, मेरी २९ वर्षकी छोरीले उमेरको ख्याल गर्न भनेकी थिई तर मेरो यो सफल जन्माई पछि उसले अवश्य बुझिहोली, उमेर चाहिँ उति महत्वको कुरा होइन रहेछ !", बिर्नबुमले भनिन् । यता डा. अल-खानले चाहिँ यो उमेरमा यो सफलताले गर्भाधानको कुनै निश्चित नीतिनियम नभएको प्रमाणित भएको बताएका छन् ।
" यो उमेरमा बच्चा पाउनु वास्तवमै खतरनाक कदम थियो, हामीमध्ये धेरै जना बूढेशकालको गर्भाधानबारे जानकार थिएन । तर पनि सफलतापूर्वक काम सम्पन्न भयो, खुशीको कुरा हो", डाक्टरको भनाइ थियो ।
यसअघि यी दुइ लोग्नेस्वास्नीले दुइ पटक गर्भाधान गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर तेस्रो पटकमा मात्र सफल भए ।
यता बिर्नबुमका ३३ वर्षीय जेठा छोरा चाहिँ आफ्ना दुइ नयाँ भाइका बारेमा निकै चिन्तित छन् । आमा निकै बूढी भइसकेकी र अझै अठार वर्षसम्म यी नयाँ सदस्यलाई हेरचाह पुर्‍याउन नसक्ने पो हुन् कि भन्ने उनको चिन्ता छ । तर बूढी आमै चाहिँ यी दुइ जन्मिएपछि नयाँ ऊर्जा थपिएको बताइरहेकी छिन् । "मेरा बा ९२ बर्ष बाँचे, आमा ८९ वर्ष। म पनि लामै समयसम्म बाँच्छु होला !" उनले हाँस्दै बताइन् ।
अमेरिकामा जुम्ल्याहा जन्माउने सबैभन्दा बूढी आमा उनी भए पनि सन् २००६ डिसेम्बर २९ मा एउटी स्पेनी महिलाले ६८ वर्ष ११ महिनाको उमेरमा जुम्ल्याहा बच्चा जन्माएर विश्व रेकर्ड बनाइसकेकी छिन् । तर बिर्नबुम चाहिँ आफूले जन्म दिएका दुइ छोरा जन्मनुअघि र पछिका घटनाबारे र आफ्ना अनुभवबारे पुस्तक लेख्ने विचार गरिसकेकी छिन् ।
30 वर्षीया जेठा छोराका साथ आमा-बुवा
कीर्तिमान उदेकलाग्दो माया बलिउड सेलेब्रिटी सुन्दरी गुगल भव्यता मूर्ख्याइँ विज्ञापन मुद्दा मामिला इन्टरनेट नग्नता उपाय परिस्थिति फट्याइँ हलिउड श्रीमानश्रीमती प्रविधि सेक्स
Tag groups: cinema, city sightings, city updates, fashion & grooming, health, misc, music, relationship, technology, television,